Kutheni i-PR Dude yakho isilela kuwe | Martech Zone
Kutheni i-PR Dude yakho isilela kuwe
NgoLwesihlanu, ngoDisemba 23, 2011 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Ngelixa ndiyayixabisa ingxoxo ye-tweet amaxesha ngamaxesha, qho emva kwexesha kufanelekile ukuba sabelane ngengxoxo apha kwaye sixoxe ngokuqhubekayo. Umzekelo endiwunikayo namhlanje uqalile ngoshicilelo olusebenze noDittoe PR ukubhengeza elitsha website.
PRDude… umntu ozibonakalisileyo okhuselayo Kwishishini lobudlelwane noluntu eligutyungelwe kukungaziwa (isicwangciso esiliqili sentlalontle), lithathe upapasho ndaba zekhampani ukwenza umsebenzi kuba ibingalingani nombono wakhe wento a upapasho ndaba zekhampani kufuneka isetyenziselwe… iindaba. Ndiza kukuvumela ukuba ufunde le ncoko:
Isimanga kukuba esinye sezizathu sikonwabela ukusebenza kakhulu kunye I-Dittoe PR Kukuba bayaqonda ukuba iinzame zabo zonxibelelwano noluntu ziyinxalenye yesicwangciso-nkqubo sokuthengisa ngokubanzi. Sisebenze kwinani labaxumi kwaye saba neziphumo ezizodwa ngokukhupha uxwebhu lweendaba ngophando olomeleleyo kunye nesicwangciso sokuzibandakanya kwezentlalo. Oku kukhutshwa kweendaba linyathelo elinye kwisicwangciso esiliqili sokunxibelelana nabantu.
Kuyadanisa ukuba iintlobo ze-PR zesikolo esidala ezifana ne-PRDude aziqondi ukuthengisa ngaphakathi, ukulungiswa kokuguqulwa, iindlela zokwenza iphepha, ukufaka uphawu, ulwazi, ukukhangela kweinjini yokukhangela… kwaye ngamanye amaxesha abaziqondi zonke izibonelelo zesicwangciso esikhulu somxholo. Enye yeefemu ezinkulu ze-PR kwisixeko sethu zisandula ukuvalwa… ishishini liyatshintsha kwaye abakwazanga ukuqhubeka. Ndicinga ukuba yile PRDude khusela.
Ngokuthumela i-tweet malunga noku - ngaphandle kokunyathela - I-PRDude inike obona bungqina bokuba ukhuphelo lwethu lwaphumelela. Ndiyayithanda inyani yokuba uyavuma ukuba ufumene ukukhutshwa kubekwe kwindawo entle kwiGoogle News. Oko kuhle kakhulu! Ngokucacileyo sifikelele kubaphulaphuli ebesingekabikho ngaphambili-injongo yosasazo lwethu lwe-PR. (Okubangela umdla ngokwaneleyo kukuba, kubonakala ngathi ukusasazwa kwengingqi ngandlel 'ithile kuye kwilizwe lonke.) Sifumene uninzi lweetweets kunye nokukhankanywa kwiwebhusayithi ekukhululweni.
Ukukhutshwa kweendaba ayisiyiyo eyokubhala “iindaba” ngoku. Umzi mveliso wePR uye wavela… kodwa ushiya ngasemva abanye babaqeqeshi bawo bePR. Abathengi kunye namashishini bafuna ulwazi ngeeinjini zokukhangela, ke ngoko kufuneka ubukho bokukhangela izinto eziphilayo. Abathengi kunye namashishini abandakanyeka ekuhlaleni, ke ukuba nesicwangciso sentlalontle kubalulekile. Nangona kunjalo, amashishini amaninzi kunye nezixhobo zemithombo yeendaba zisathembele kwiinkonzo zokuhambisa iindaba ukufumana ulwazi abalukhangelayo-ke ukukhutshwa kweendaba kusebenza kakuhle.
A ukukhutshwa ngokukuko kweendaba ngolwabiwo olukhulu luya kubonelela nge-backlinks evela kwiziza ezinegunya eliphezulu kunye nokubaluleka kwishishini lakho. Sibonile ukubambeka okukhulu kukhuphelo lweendaba ezivela kubaxhasi bethu, sabona ukuphuculwa kwenqanaba labo, kwaye bafumana uninzi lweendlela ngokuzibonisa.
Ndiza kuqhubeka nokusebenza nge inkqubela phambili yobudlelwane noluntu Iyaqhubeka nokundifumana kunye nabaxhamli bam ngamathuba amahle kwishishini, kubandakanya amanqaku kwiNew York Times, iCult of Mac, iWired Magazine, iMedia Connection, iVentureBeat, iMashable, njl. Kwaye okona kubaluleke kakhulu, bayabonakala ngomsebenzi wabo … Ukhaliphile ngokwaneleyo ukuba angabelana ngamagama abo kunye neefirm zabo kwi-intanethi
Ke… i-PRDude isenokungavumelani nam (ngoku undityhola ngaphezulu ngokuba nabalandeli bobuxoki, nabo). Kulungile, andikhathali. Akangabo abaphulaphuli bam ekujoliswe kubo kwaye akanalo nofifi malunga nokusebenza kwentengiso iyonke esiyenzayo. Ngelixa etrola ukukhutshwa kweendaba ngokungaziwa, sifumana iziphumo kubaxumi bethu kwaye sikhulisa amashishini abo. Ndiyathemba ukuba ngenye imini uya kukwazi ukurhweba kumatshini wokubhala kwaye ajonge indlela i-intanethi eguquke ngayo kwindlela esinxibelelana ngayo.
tags: prqinakhuphelazokushicilelwaEyobudlelwane boluntu
Ngomhla wama-28 ku-Disemba 2011 ngo-10: 30 AM
Ndiyazibuza ukuba kuthathe ixesha elingakanani ukusukela lo mfo eqhubeka nemfundo? Oonjingalwazi bazama ngamandla ukushenxisa umxholo "wokukhululwa koonondaba" kwaye bayanyanzelisa ukuba kubizwe ngokuba "kukuhanjiswa kweendaba" kuba… kulungile… inokufeza yonke into oyikhankanyileyo, uDoug.
Ngomhla wama-29 ku-Disemba 2011 ngo-3: 33 PM
Andinanto ngokuchasene nokusetyenziswa kokukhutshwa kweendaba njengecebo lokuthengisa. Into endiyibonisa nje yayingumxholo wokukhutshwa. Wagqibela nini ukubeka umhleli wephephandaba okanye umvelisi wenkqubo yeendaba, into yokuqala abayicelileyo kukukhutshwa kweendaba. Ukongeza, xa uthumela ingxelo yokushicilelwa kolu hlobo ngocingo, ithunyelwa kwiibhokisi zebhokisi engenayo. Kungenxa yoko le nto abahleli benentiyo ngabantu be-PR abathumela inkunkuma, ngelixa eneneni, ziziintengiso ezisebenzisa le nkonzo umxholo ongena ndaba. Yiyo yonke into endiyithethayo. Ukuba oko kukucinga okudala, undibize ngokuba sisikolo esidala, kodwa ndicinga ukuba kubuhlungu uphawu olungaphezulu koncedo xa uthumela intatheli kwiintatheli ukuba nabani na onesiqingatha sobuchopho uyazi ngekhe agqunywe. Singaxoxa ngale nto yonke oyifunayo, kodwa sivela kwimisebenzi eyahlukeneyo. Ndiyabahlonela abo ndithumela umxholo kubo kwaye ndizama ukuvavanya ukuba yinto abanokuyidinga. Imalunga nokwakha ubudlelwane hayi ukuqhuma nge-imeyile kwihlabathi. Nyakhomtsha!
Ngomhla wama-29 ku-Disemba 2011 ngo-6: 14 PM
PR Dude - Ndisayikhupha into yokuba "yinkunkuma" okanye "ayizondaba". Ndithethile malunga nesigqebelo kule post - kodwa kukho ezinye. Kubonakala ngathi kukho uhlobo oluthile 'lwentengiso kuthelekiswa nobudlelwane boluntu' phaya. Inkqubo ye- DK New Media ubudlelwane kunye ne-DittoePR ziindaba-inkampani ye-PR yemveli eguqukileyo kwaye isebenza ne-arhente yemithombo yeendaba. Kwaye ... iarhente entsha yemidiya efumana ixabiso elingaqhelekanga kubudlelwane boluntu.
Ngenxa yokuba ungacingi ukuba kufanelekile, oko akuthethi ukuba ayisiyiyo. Impendulo kukhululo lweendaba ivelise impendulo ebalaseleyo. Ngapha koko, eyakho yayikukuphela kokugxekwa esidlangalaleni esinokukufumana. Kwaye, kwakhona, ngokugweba ngokubekwa okukhulu esikufumeneyo-yayiziindaba ezazithakazelelwa ngabanye abaninzi.
Ndiyayibulela impendulo yakho engagungqiyo kwincoko, nangona!
Ngomhla wama-29 ku-Disemba 2011 ngo-6: 34 PM
Ndiqikelela njalo. Andiqinisekanga ukuba uthetha ukuthini ngokubekwa kwimidiya nangona. Nantoni na ehamba ngocingo iyathathwa ngamajelo eendaba abhalisela inkonzo yayo, kodwa ngaba oko kuthetha ukuba intatheli iyakuyeka into ayenzayo ukugubungela olu hlobo lweendaba. Ngo-1996, ewe ngo-2011, hayi. Ndingaphakanyiswa ukuba kukho naziphi na iindawo ezihloniphekileyo zemithombo yeendaba ezinje ngeNkanyezi ye-Indy okanye ukuthengisa okufana neAdweek okanye iAd Age kubanika oku kujonga okwesibini. Ukuba uyiphangele njengomdibaniselwano okanye ubambiswano, ndiye ndabona ixabiso leendaba. Iwebhusayithi eyilwe ngokutsha ayonelanga kwimigangatho yobuntatheli ngokoluvo lwam. Andigxeki iqhinga, umxholo kuphela. Emva koko, ndandiphendula kwenye into engekho kwisithuba sakho.
Ngelishwa, umthengisi nxamnye nePR into iqhubeka iminyaka njengoko usazi. Ukungakhubekisi, kodwa andikuthandi ukubizwa ngokuba ngumthengisi. Sisebenza ngeenjongo ezimbini ezibalulekileyo kodwa ezahlukileyo zabathengi kunye neempawu ekugqibeleni, injongo efanayo. Abantu be-PR bathembele kakhulu kubudlelwane obakhiwe nabahleli, abavelisi, iibhlog, njl njl. Ungumblogi kwindawo yokuthengisa. Ngaba ungaliqhuba ibali malunga nomthengi ophuhlise iwebhusayithi eyilelwe ngokutsha kwibhlog yakho? Zeziphi onomdla wokubhala ngazo ukuba yonke iwebhusayithi eyile ngokutsha indawo yayo iqale ukuthumela ukukhutshwa kweendaba ngayo? Ugqiba njani ukuba kubalulekile ukubhala malunga nantoni kwaye hayi? Nceda undixelele ukuba ndiyaphambana kwaye andenzi ngqondo apha. Ziholide kwaye zininzi iintsuku ezichithwe kuselwa. Masinwabe! 🙂
Ngomhla wama-29 ku-Disemba 2011 ngo-6: 39 PM
I-PR Dude: Impendulo yindlela esijonga ngayo ukuba sibhale ntoni kwaye singabhali ngantoni. Ukuba impendulo ilungile, siyaqhubeka nokusebenzisa isicwangciso. Ukuba impendulo ayilunganga, sifumana entsha.
Ngomhla wama-29 ku-Disemba 2011 ngo-6: 51 PM
Enkosi. Ndikunqwenelela okuhle kodwa. Ndazise xa uku-Big Apple kwaye ndiza kukuthengela isiselo. Akukho ngxoxo mpela iscotch esihle. Nyakhomtsha!
Isiphelo esicocekileyo mpikiswano. Ndivuma ukuba kuninzi kakhulu "crap" phaya, kodwa ndicinga ukuba ukukhutshwa kwewebhusayithi kulungile, kwaye yile nto ndiyaziyo ukuba ilungile PR - kuxhomekeke kwinkampani, kubaphulaphuli, kwiindawo ezikhutshelwa kuzo ukuya, njl. ndishiyeke kwaphela noDouglas ekukhululweni kwakhe, kodwa siyavuma ukuba kufanelekile ukuba sikulumkele ukukhutshwa ngokugqithiseleyo. Enye into iblitz, iyabunciphisa ubukho bayo.
Ingxoxo mpikiswano enkulu, kwaye kumnandi ukubona abantu ababini abanokuvuma ukungavumelani nentlonipho! +1 kuni nobabini!
Enkosi. Andimazi ngokobuqu uDoug, kodwa ndiyazi ukuba ngumntu ohloniphekileyo kubuchwephesha bakhe, kwaye nokuba umntu uvela phi na, sonke kufuneka siphathane ngentlonipho. Ndinqwenela ukuba wonke umntu axoxe ngendlela ephucukileyo ngakumbi abagqatswa baka-Mongameli okanye nabani na obalekela i-ofisi ekhethiweyo. Ndiyabheja siza kubona ukuhlaselwa okungalunganga kunye nokuhlaselwa ngokobuqu njengoko ubushushu buphezulu.